Ubuchwepheshe be-Smart nokubusa umhlaba wonke kwezobuchwepheshe kuzosindisa isimo sezulu: UMartin Vrijland
I-DIRECT (ngaphandle kwe-PayPal)
Ubuchwepheshe be-Smart nokubusa umhlaba wonke kwezobuchwepheshe kuzosindisa isimo sezulu
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-3 December 2019	• 9 Amazwana
Uhulumeni womhlaba wonke wezobuchwepheshe uwukuphela kwekhambi lokusindisa umhlaba wethu ekubhujisweni ngenxa yenhlekelele yesimo sezulu esehlele. Lapho izinkanyezi ze-movie zizwakala ngokukhala kwensimbi, usuvele ukholisile ingxenye yabantu emhlabeni ukuthi kukhona okudingeka kwenziwe ngempela, ngoba ukubukeka okuhle nokudumisa kwabalandeli kuyisisekelo. Intombazane enama-braids nayo yenza kahle, njengentatheli elula evela emazweni aphansi enikeza abaholi bomhlaba ukuqhuma.
Ukuthi umkhulu omkhulu waleyo ntombazane enama-braids, u-Greta Thunberg, yona Umphumela we-Arrhenius (ukufudumala komhlaba) futhi wazakhela uMklomelo kaNobel njengomsunguli walo mklomelo, asifuni ukuzwa. Lowo 'mbhali olula', uRutger Bregman, ufuna a kwezobuchwepheshe kakhulu ukuphatha umhlaba, empeleni sicabanga ukuthi kulungile. Ngemuva kwakho konke, kungumzuzu we-1 we-12, ngakho-ke kufanele usebenze kanzima. Sikholwe ukuthi ngazo zonke lezo zinkanyezi ezinhle ze-movie futhi sesikholelwa ukuthi ngomfanekiso omangalisayo wokuqothuka kanye nokuqothuka. Umuntu ojwayelekile akamane azinikeze inkathazo yokufunda amaqiniso, kepha uthembela ethembeni lezinkanyezi zefilimu, osopolitiki nabezindaba.
Ngokwenza lokho kwehla i-UN ukuthi ibe yimbangi enkulu ngemuva kwesimo sezulu futhi sekukhonjisiwe ukuthi i-Extinction Rebellion iyigxeka ngokusobala iCIA Gene Sharp (inguquko yemibala) indlela ukukholisa inqwaba ukuthi sizofa. Ngaso leso sikhathi, umyalezo oya ngemuva uyavikelwa. Ososayensi abucayi nabadumile, abangafakazela ukuthi umhlaba awushisi ngenxa ye-CO2, bahlaselwa kanzima. Lokho kwenzeka ngisho nangokomzimba:
“Abantu abangaphezu kwe-200, kufaka phakathi inqwaba yososayensi, njengamanje bacashe eJalimane. Ngingomunye wabo. Ngingakutshela ukuthi ngiseMunich, kodwa angikwazi ukukutshela ihhotela lami. Ngingakutshela ukuthi ososayensi bazohlangana ngoLwesihlanu nangoMgqibelo babelane ngolwazi lwesayensi, kodwa angikwazi ukukutshela ukuthi kuphi. Lo mhlangano, lapho ososayensi bezokwethula khona ubufakazi obuphikisana nenselelo yesimo sezulu esishiwo ukuthi, bewuhlelelwe umphakathi, kepha izigebengu zesimo sezulu esibuthakathaka sesiphoqelele ukuba sicashe. Uhulumeni waseJalimane uyenqaba ukuvikela ososayensi ekusatshisweni ngodlame. "
Lokho isiqeshana off lesi sihloko, okukhombisa futhi ukuthi iqiniso lihambisana nemizwa. Eqinisweni, umbono onjalo udalelwe ukuthi abantu bakubone kuyinto esemthethweni ukuthi isinyathelo sithathwa ngezinyathelo zodlame nezempi. Ngemuva kwakho konke, uma umhlaba usongela ukubhubha, ngakho-ke umqondo uwukuthi, kufanele sizivikele kulabo bantu abangafuni ukukubona.
Iqembu lamakholwa wesimo sezulu kumele livikele ubuntu nomhlaba kubantu abangakholwayo abangaboni. Futhi ngakho-ke sibiza i-Inquisition yaseSpain phezu kwethu ngebhantshi elisha. Umuntu othanda ukuthula ozimisele ukusindisa umhlaba ngokuzumayo ubonakala ezimisele ukugwema izindlela. Kepha, sijwayele lowo mqondo entshonalanga yethu echumayo, ngoba noma ngabe "siletha intando yeningi" kulawo mazwe abusayo wobushiqela (owothile uwoyela), khona-ke asingabazi ukulahla izinto ngama-drones nangamabhomu. Uma kukhulunywa ngesimo sezulu, abantu manje futhi bakhetha ukungabi nomusa nobudlova ngaphandle kwesihe. Labo bantu abakaze bazikhathaze ngokulalela ososayensi okungafanele kuzwakale (njengokuthi laphacha, babeka iminwe yabo ezindlebeni futhi banamathele esikhundleni sabo.
Awukwazi ukukholisa abantu abakholwa ngokweqiniso ukuthi umhlaba uzophela uma singenzi lutho ngawo ukuthi uhlukile, ngoba kuye kwathiwa kubo le ndlela yokubabaza. Akukona mayelana isizathu, kodwa kuphela mayelana nomuzwa wesisu. Akukho sishoshovu sesimo sezulu esisodwa owaziyo ukuthi iyini ngempela i-CO2 nokuthi umphumela wayo uwukuthi wenza umhlaba ube luhlaza futhi ungafudumali. Ngisho nokuphinda leso sitatimende lapha futhi, kungahle kufundwe, kodwa ngokushesha kubangela ukuthi izithende ziwele esihlabathini. Awufuni ukuzwa lokho njengesishoshovu sesimo sezulu. Uqinisekile, ngoba ubone amapulasitiki amaningi entanta olwandle futhi ubone isibalo sabemi be-polar sincipha. Konke okwenziwe ngabezindaba ukuthonya ukubonwa kwesixuku kubonakala kuyinkulumo-ze ephumelelayo futhi, njengoba kwenzeka njalo ngenkulumo-ze, yingxenye encane kakhulu eyiqondayo. Lokho kungenxa yokuthi abantu abakholelwa nje ukuthi ohulumeni nabezindaba bangaqamba amanga. Izinduna zizokwamukela ugibe lwazo njengobubi obudingekayo ukusindisa umhlaba (nobuntu nazo zonke izilwane nezitshalo).
Njengalokho URutger Bregman icela ubuchwepheshe futhi uma manje sibona inkulumo yohlobo lobuKhomanisi emazweni amaningana, lapho-ke siyakwazi ukubona ukuthi yiziphi izigaba ezizoholwa yizixuku. In lesi sihloko Ngachaza ukuthi ubukhokho kanye nokwanda kwezinkampani kuholele ezizindeni eziningi. Eqinisweni, lokho kwabeka isisekelo 'sobukhomanisi ejekeni elisha'. ENgilandi sesivele sibona ukuthi izinkampani ezinkulu zikaJeremy Corbyn ifuna ukwenza ubuzwe futhi (ukwenza ubunikazi bombuso) futhi maduze sizobona lo mkhuba yonke indawo, ngokuqinisekile lapho kufika ukuwa komnotho obekuhlelwe isikhathi eside; leyo ngozi lapho igama elakhiwe ngokucophelela 'ilungelo' (elixhumene noDonald Trump, uBoris Johnson, uThierry Baudet, u-Alex Jones, uJensen, njll.) lizosolwa.
Ukucabanga okubucayi kubhaliwe ngokuthi 'kulungile' futhi ukuthi ilebula lizosolwa maduze ngakho konke futhi kudala indawo yokungenelela ngokweqile. Le ndlela yokungenelela eyedlulele izokwakhiwa ubukhomanisi esejokeni lobuchwepheshe. Kuzoholela ekuvinjelweni okuqinisekile kuyo yonke imibono ebeka usongo ekuhlanganiseni kwamandla amandla. Yize kunjalo, lowo mzimba womcabango uvuse umnotho ngalesosikhathi futhi lowo mzimba womcabango usongela isimo sezulu.
Ngabe lokho kubukeka kanjani njengobukhomanisi obunjalo bokubusa? Yebo, uma umnotho uzoba sendleleni yomhlaba wonke, sizoqala sibe nesikhathi sobuphofu obukhulu (futhi ngenxa yalokho isiyaluyalu nokwesaba). Lokhu kuvame ukudala i-vacuum yamandla ngengalo entsha enamandla enikeza ikhambi. Kulindelwe ukuthi ngaleso sikhathi abantu bazokwamukela imali eyisisekelo njengesixazululo sesidingo esikhulu sezezimali. Uhlelo lwezezimali luzobe lubhidlikile ngalesosikhathi lapho kudingeka khona ukungenelela okusha.
Ukusetha kabusha ngokuphelele kohlelo lwezezimali lomhlaba wonke, lapho idola libuse amashumi eminyaka (ngomphumela wokuthi i-US ingabusa umhlaba wonke), kuzoba yisisombululo. Ukuwohloka komnotho, okube nokudideka kwezenhlalo ngenxa yalokho, kuzovusa ikhwelo lokuthola isisombululo esivela phezulu. Umqondo wokuwohloka komhlaba okusondelayo yingxabano yesibili efuna ukungenelela okuqinile. Zombili zizogcizelela ukukhala ngamandla. Lokhu kuzoqedwa yi-technocracy.
I-Technocracy isho ukuthi kunesixazululo sobuchwepheshe esihlelekile esisemthethweni ukusenza kangcono ukusukela manje. Lokhu ngokwemvelo kudinga nokuphatha okuphakathi. I-blockchain kanye ne-5G 'i-intanethi yezinto' grid smart izonikeza ikhambi. Ukusetha kabusha kwezezimali kanye nohlelo olusha lwezezimali lomhlaba jikelele kungaqedwa kangcono ngensizakalo yezezimali emhlabeni jikelele Uma, ngaphezu kwalokho, ungathola umnotho ukuthi usebenze futhi ngokunikeza abantu imali eyisisekelo, khona-ke uzoba (ngaleso sikhathi) inani labantu abakhathele selisebenza kuwe.
Imali ye-Crypto ilusizo kakhulu uma kukhulunywa ngezinyathelo ezinqala zemvelo. Ngaphakathi 'kwe-inthanethi yezinto' ungabheka konke ukuthengiselana kwemikhiqizo noma izinsizakalo ngokuningiliziwe. Ungahle unqume kokunye ukuwa ukuthi yiluphi umugqa wokudla wezemvelo futhi ulungise izintela ngokufanele.
Ukuze kube lula, ake sithi uhlamvu lwemali lwe-UN luyeza. Uhlobo lwemali oluthola inani eliphakathi kwezinye zezimali ezindala (ama-euro, ama-yuan, amadola, ama-ruble). Cabanga nje ukuthi umbuso omusha - ungena ezenzweni zokuphehla ugesi (ngenxa yezingxabano zezomnotho nezenhlalo "ezibangelwa ilungelo") - uphakamisa umbono wokuphinda usebenze amabhange amaphakathi bese uvala zonke izikweletu, bese uwafaka ngenani eliyisisekelo. Ukukhipha izinhlamvu zemali ze-UN. Zonke izakhamizi zithola i-1000 UN-zemali eyisisekelo yenyanga. Amanani wemikhiqizo nawo asethwe kabusha futhi nomnotho uyabuyiselwa. Izinkampani ezinkulu zenziwa kuzwelonke, ukuze nabo bakhululeke intaba yesikweletu futhi injini yezomnotho iqale ukuguquka futhi. Sivele sikuloluhlobo lwesimo sobukhomanisi, kepha izixuku ngeke zithintwe yileso sikhathi. Inqobo nje uma konke kuphinda kuvuseleleka futhi.
Iyunithi yokukhokha entsha ye-crypto (isibonelo uhlamvu lwemali lwe-UN olusanda kwenziwa lapha) yenza konke kulandelwe ngokuphelele ngaphakathi kwegridi ye-5G ye 'inthanethi yezinto'. Uma uthenga ipakethe likagwayi kulezo zinkulungwane zemali ze-UN, awuthengi imithwalo kuphela (lokhu kuzoba umthetho), kepha kuthinta nezempilo yakho. Uma usadla inyama futhi wenza kabi imvelo, ngoba lezo zinkomo zikhipha "i-nitrogen" futhi ngaphezu kwalokho impilo engcono yezinyama impilo yakho.
Umshuwalense wakho wezempilo ungakhushulwa ngokuzenzakalelayo 'kwi-inthanethi yezinto', ngoba konke okusebenzisa kungalinganiswa ngokushesha. Intela yakho yemvelo nayo ingadonswa ngokuqondile kubhalansi yakho yohlobo lwemali ye-UN. Kugridi ehlakaniphile, enamakhamera wokuqashelwa kobuso nemakrofoni kulenga kuyo yonke indawo, kungenzeka ukuthi lapho usho ehhovisi lebhokisi lase-Albert Hein, ngokwesibonelo,ma'am, ungiphathela insini?“, Uthola ngokushesha amaphuzu wokujeziswa ngoba usebenzise igama elithi 'madam'. Umthetho omusha wokubandlululwa komphathi omusha uthi lokhu kuyacwaswa kweqembu le-LGBTI. Indlela yokuqapha umphakathi ngokususelwa kwimodeli yaseChinese yeSesame Credit isivele isetshenziswa kwethulwa ngokushubile ezigabeni zebhola leDashi. Amaphoyinti wezinhlawulo-ke asho ngokuzenzakalelayo ukuncishiswa kubhalansi yakho yohlamvu lwe-UN.
ITurkey, izwe engilibize iminyaka njengeqembu elizothatha izintambo zombuso eYurophu nge2023, isivele ihlele konke ukwethula i-crypto lire e2020. "Ilira yedijithali yase-blockchain esekwe kuzwelonke kulindeleke ukuthi ikhishwe yiCentral Bank ngokuhambisana nohlelo lwaminyaka yonke lomongameli i-2020, kusho uCointelegraph eTurkey nge-5 Novemba.Funda ngaphambili lesi sihloko.
Emhlabeni wezobuchwepheshe, konke kubhekwe kusuka endaweni ephakathi kwezobuchwepheshe. Lobu buchwepheshe benza sikwazi ukwenza lokho ngezinga elihle kakhulu. Uma abantu abanjengoRutger Bregman bebiza ukuphathwa kobuchwepheshe futhi baxhumanise nokuthi ukujezisa wonke umuntu ocabanga ngenye indlela ngezinyathelo zesimo sezulu, ngokwesibonelo, singaphetha nje ngokuthi lobu buchwepheshe buvula indlela yamaphoyisa acabangayo. Amasu amakhulu we-Big Idatha manje aqapha yonke imigwaqo yethu ye-intanethi, kufaka phakathi zonke izinzwa ezihlakaniphile, azokwazi kahle ukuthi yimiphi imibono umuntu ngamunye abambelela kuyo. Uma sihlanganisa lokho 'ne-intanethi yezinto', imali elandekayo (i-crypto) nohlelo lwama-Sesame Credit eChina, lapho-ke singofakazi ekwakhiweni kwe- ubuchwepheshe be-fascist:
Ebuchwephesheni be-fascist, umbuso ungabeka imibono yawo kubantu abalethwe ngokuphelele futhi baqashwe nganoma yisiphi isikhathi sosuku.
Encwadini yami entsha ngichaza ukuthi lo mbhalo ubelokhu uneminyaka emashalofini futhi ngichaza nokuthi kanjani u-rainbow kufanekisela ukwethulwa kwenkolo entsha yezwe. Uthingo luwuphawu lukahulumeni omusha wezwe elizokwethulwa oluzobeka nenkolo entsha. Ungase futhi ukhumbule ukuthi uthingo oluvela ezindabeni zezikhukhula ezingatholakala emasikweni nasezinkolweni ezahlukahlukene emhlabeni jikelele. Lokho uthingo kumelela ukuguqulwa komhlaba emva kwesikhukhula esosuse konke.
Sesisondele ngaphambi kwesikhukhula esikhulu. Kungakho uthingo luphinde lube wuphawu lwale ukunyakaza. Ushintsho oluyotholwa yisintu luzokwakha izulu elisha nomhlaba omusha ngokusekwe kubuchwepheshe. I-transgender transhuman ngaphansi kwefulegi likahulumeni wobuchwepheshe beLuciferian (uthingo) yinjongo. Ikusasa lingathathi hlangothi ngokobulili futhi ikusasa liwukudlula emhlabeni. Ungahle uthole ukuthi manje akucaci manje yingakho kuchazwa ukuthi ungene kulokhu. Kubalulekile ukukuqaphela lokhu. Kungakho kusiza kakhulu ukufunda incwadi yami, lapho ngichaza khona umgwaqo ophelele wokubusa umhlaba nenkolo yomhlaba futhi ngichaze ngokuningiliziwe inhloso.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: townhall.com, theguardian.com, cointelegraph.com
Iyingozi kangakanani i-5G nokuthi ifakwe ngasese kanjani
Umkhulu kaGreta Thunberg ube ngumsunguli womphumela wokushisa kwezindlu kanye nokuncishiswa kwenani labantu ngama-eugenics
I-capitalism kanye ne-sham yeningi, umgwaqo ohamba kancane oya ku-fascism yamakhomanisi
I-UN manifesto '90 iyabonisa: izindlela zesimo sezulu ezakhelwe ukusebenzisa uhulumeni wezwe
URutger Bregman ufuna umbuso wobumbano lwe-UN
Amathegi: 5G, isi-Chinese, Idolobha, credit, crypto, lwemali, afakiwe, grid, internet, of, sesame, smart, ubuchwepheshe, izinto, uhulumeni wezwe, inkolo yezwe
Mayelana Nombhali (iphrofayela yombhali)
I-URL yokulandelela emuva | Amazwana RSS Feed
UMartin Vrijland wabhala:
3 December 2019 ku-13: 39
Ngena ngemvume ukuze uphendule
Ukushona kwelanga wabhala:
3 December 2019 ku-16: 34
3 December 2019 ku-15: 00
I-Shoe Lace wabhala:
4 December 2019 ku-07: 39
Sawubona Martin, i-athikili enhle futhi! Uyazi ukuthi kufanele ubuke nini futhi kuphi ihuman? Angikwazanga ukukuthola lokhu ngeshwa.
4 December 2019 ku-11: 13
Engikuqondayo ukuthi ifilimu lidutshulwa kumamovie endawo endabuko. Angizibonanga le filimu ngokwami ​​futhi ngikhumbule ukuthi ikhombisa iqiniso futhi ukuthi isebenze njengetha lezokuphepha, kepha uma ungayibhoboza ususendleleni.
Ngicabanga ukuthi kuwusizo ukufunda incwadi yami ngaphambi kwesikhathi, ngoba ngichaza umehluko phakathi kokukodwa komsuka wethu kanye nobunye bamanga bama-transhumanists. Ngaphezu kwalokho, ngichaza ukuthi kungani (ibhulokhi yamandla esiqondisa kule ndlela) bafuna sihlangane ne-AI.
3 December 2019 ku-21: 27
Ukuphawula okuvela kumfundi kuFacebook:
I-SMART ihunyushwe 'smart' ku-NL. Kodwa-ke, isifinyezo sokuthile okuhluke ngokuphelele: "Imfihlo Yezempi Emkhosini endaweni Yokuhlala".
NgeDashi, "isikhali sempi esiyimfihlo ezindaweni zokuhlala"
3 December 2019 ku-21: 57
UGreta Thunberg ophekwa nguJennifer Morgan waseGreenpeace, ohambe no-Al Gore (umqambi wamanga wamanga wonke, obanjwe ngokuphelele 'iQiniso Elingelona iqiniso') kwiForamu Yezomnotho Yomhlaba eDavos. "Izimali zeGreenpeace zivela eGreta, futhi abanikeli bazo baqukethe uhlu olude lwabosonhlalonhle. UGreta uvele e-Alberta, eCanada, ezinsukwini ezimbili ngaphambi kokhetho, etshela abantu ukuthi ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu kumele bayeke imisebenzi yabo. "
IGreenpeace kwakuyi-NGO eyethula uthingo njengophawu emhlabeni wonke. Encwadini yami ngiyachaza ukuthi kungani uthingo luwuphawu lomhlaba omusha wethekhnoloji futhi kufanele usiholele ekuhlanganiseni ne-AI.
Uyemukelwa emshinini (wahlabelela uPink Floyd).
4 December 2019 ku-11: 12
4 December 2019 ku-11: 18
Yebo, le band ihlala iyintandokazi yami ... izingoma eziqinile.
Ngaphezu kwalokho, igama libalulekile. Sebevele babona lo 'mshini' uzilimaza.
Kufanele ungene ngemvume ukuze ukwazi ukuthumela amazwana.
« URutger Bregman ufuna umbuso wobumbano lwe-UN
Yazi umlando ukuze uqonde i-ajenda ye-UN 2030 »
IZIMBONI NGUJULY 2017
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.830.183
Indoda enguTransgender izala ingane yomlingani okungeyona eyakhe kaningi enikela ngesidoda sowesilisa
Ngabe uhlelo lokulwa nezindiza e-Iranian olwehlise iBoeing 737-800 (indiza ye-PS752) lukhishwe?
Sekuyisikhathi esingakanani uTrump esosizini manje lapho izimpawu zokuqala zempi yombango zisabonakala?
I-Iran, ukuhlaselwa kweSoleimani, ukuhlasela kanye nokudubula indiza i-PS752 konke sekuhleliwe?
Ukuphindukuzalwa nomjikelezo wangempela njengoba sikubona
UWilfred Bakker op Sekuyisikhathi esingakanani uTrump esosizini manje lapho izimpawu zokuqala zempi yombango zisabonakala?
SandinG op Ngabe uhlelo lokulwa nezindiza e-Iranian olwehlise iBoeing 737-800 (indiza ye-PS752) lukhishwe?
Hlaziya op Ngabe uhlelo lokulwa nezindiza e-Iranian olwehlise iBoeing 737-800 (indiza ye-PS752) lukhishwe?
Faka ikheli lakho le-e-mail ukuze ubhalise futhi uthole i-imeyili ngokushesha nge-athikili entsha. Ungaphinda uchofoze i-bell eluhlaza ukuze uthole umlayezo we-push efonini yakho, i-pad noma ikhompyutha.
ISITATIMENDE SOKUPHILA AVG PROOF
FUNDA ISITATIMENDE SOMTHETHO LAPHA
© 2020 Martin Vrijland. Wonke amalungelo agodliwe. Isihloko ngu-Solostream.
Ngokuqhubeka nokusebenzisa isayithi, uyavuma ukusebenzisa amakhukhi. ulwazi oluthe xaxa
Izilungiselelo zekhukhi kule webhusayithi zihlelwe 'ukuvumela amakhukhi' ukukunikeza isipiliyoni esiphezulu sokuphequlula kungenzeka.Uma uqhubeka ukusebenzisa lewebhusayithi ngaphandle kokushintsha izilungiselelo zakho zekhukhi noma uchofoze ku- "Yamukela" ngezansi bese uyavumelana lezi zilungiselelo.